Ungabasusa njani abalandeli kwi-Instagram | I-Androidsis
Kuya kubakho umntu okulandela nge-Instagram kodwa awufuni ukuba lo mntu akwazi ukukulandela. Zinokubakho izizathu ezininzi zayo, ngokulula kukuba awuyithandi, okanye ibot kwinethiwekhi yoluntu. Ngethamsanqa, inethiwekhi yokuncokola yazisa ngomsebenzi wokucima abalandeli, esinokuthi siwasebenzise ukuba sineakhawunti yoluntu okanye yabucala kuyo.
Yinto elula ngokwenene ukufezekisa, ke apha ngezantsi sikubonisa amanyathelo ekufuneka siwalandele Uyakwazi ukususa abalandeli kwi-Instagram. Ke, ezo akhawunti zingenamdla kuwe okanye ongafuni kulandelwa, aziyi kwenza njalo.
Kungumsebenzi obengekho kwisicelo esidumileyo ixesha elide, kodwa esinokuwusebenzisa ngawo onke amaxesha. Ukongeza, isebenza zombini iiakhawunti zabucala nezikarhulumente. Yayo, kufuneka singene kuqala iprofayile yethu kwinethiwekhi yoluntu kwaye ucofe inani labalandeli esinabo kuyo.
Emva koko siya kufumana uluhlu lwabantu abasilandelayo kuyo. Kuya kufuneka simfumanise umntu esingafuni ukusilandela kolo luhlu. Ukuba uyafuna ungasebenzisa injini yokukhangela ukufikelela kulo mntu ngqo. Ngayiphi na imeko, xa siyifumene, Kuya kufuneka sicofe amanqaku amathathu athe nkqo avela ecaleni kwegama lawo.
Ngokwenza oku, siya kuthi Phuma ukhetho lokususa lo mlandeli kwiprofayili yethu. Kufuneka siyinike ukuba siyicime, kwaye lo mntu uza kuyeka ukusilandela. Ke ukuba sineprofayile yabucala kwisicelo, ngekhe ukwazi ukubona iimpapasho zethu kuso.
Njengokuba ubona, Amanyathelo ekufuneka elandelwe kule meko alula ngokwenene. Kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba ukwazi ukushenxisa umlandeli kwinethiwekhi yoluntu edumileyo. Ke ukuba kukho enye ekukhathazayo, ungabhenela kule ndlela.
Uyenza njani idatha yokonga kwi-Instagram
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungabacima njani abalandeli kwiakhawunti yakho ye-Instagram